Chii Chinonzi Google Analytics Bounce Rates? - Semalt Inopa Mhinduro
Vafiniti vemunzvimbo vanofanira kuziva kuti vangani vanhu vanoshanyira nzvimbo dzavo zuva rega roga kuti vaongorore kushanda kwavo. Imwe yematricrics inoshandiswa kuyera izvi zvikamu ndeye kuwedzera kwehuwandu hunoverenga nhamba yevanhu vanogara pane peji uye hapana chavanoita pairi.
Basa rakadaro nevashanyi haibvumi kuita chero kupi zvako kubva kuGoogle Analytics. Jack Miller, uyo Semalt Mutungamiri Mukuru weVatengi veMutambarakede, anotsanangura kuti kubhadhara mitengo kunobatsira vadzidzisi vepawebhendi kuti vaongorore hune peji kana vateereri vavo. Vateereri unhu hunoreva kana nzvimbo inoenderana nechinangwa chayo.
Kuverenga kweBounce Mitengo neGoogle Analytics
Google inotarisa matanho ekuparadzanisa nekuparadzanisa sarudzo imwe peji nemasangano ose anowanikwa.
Kuve nekukwirira kwepamusoro kwewebsite kana peji kunogona kuita chero ipi zvayo mitatu:
Unhu hwepeji ihwohwo hahukwanisi.
Vateereri vanotarisana havakwanisi pane zvinyorwa zviri pawebsite.
Mashoko epaji iyoyo chaiyo akakwana zvakakwana.
Bounce Rate uye SEO
Kwakave nekukakavhiringidzwa kukuru pamusoro pekuti kutsvaga injini kushandisa bounce mazinga sechinhu chakakosha. Zvakaoma kufungidzira Google kutora data kubva kuGoogle Analytics kuti iishandise paunotarisa mawebsite. Chikonzero chemuganhu uyu wekufunga ndechokuti kana muridzi wacho asingashandisi GA zvakarurama, ipapo ruzivo haruna kuvimbika. Chero mamiriro ezvinhu, zviri nyore kushandura bouncer rates. Zvakakosha kuve nechokwadi chokuti vanhu vanogara pane imwe nzvimbo kubva kune injini yekutsvaga . Rudzi rwemhando iyoyo runogona kuva chinhu chakakosha, asi kwete nenzira yatinoona muG GA.
Kududzira Bounce Mitengo
Kana chinangwa chepeji ichi chizivise, kukwirira kwakanyanya hakusi chinhu chakashata.Vadzidzisi vanokurudzira vadzidzisi kuvaka zvikamu izvo zvinosanganisira vashanyi vatsva. vashanyi mutsindo wokuvandudza kubatanidzwa panzvimbo iyi.
Kana peji yacho ichifanirwa kugoverana nevashanyi, zvino kuwedzerwa muhuwandu hwemafambiro kwakaipa kwebhizimisi. Kugadziridza peji pachayo ndeimwe yenzira dzekugadzirisa chikanganiso ichi. Kune zvimwe zvikonzero zvepamusoro bounce mazinga, uye kumusoro kwadzo ndezvokududzira kushingaira. Kana tsanangudzo yacho isingaenderani nehuwandu, vashanyi vachabva paji peji. Kana munhu akajeka nezvemabasa ewebsite, ipapo kuvhara kwepasi kwakadzama chiratidzo chehutano hwevateereri.
Bounce Rate uye Kutendeuka
Bounce rates inoyera kubudirira, uye kuwedzerwa kunofanira kubatsira muridzi kuti achinje chigadziro chekuvandudza nekushandurwa. Uyewo, magetsi anokwanisa kubatsira mukugadzirisa kuti nei kune vanhu vazhinji vanogunun'una. Newsletters, referral website, uye AdWords vose vanogona kubatsira pakugadzirisa mazinga. Kuchengeta ziso rakarinda pane izvi kunogona kubatsira kuderedza dambudziko nekuvandudza kutendeuka kwehuwandu.
Kunyatsotarisa kana Dhewing Conclusions
Annaturally low bounce rate inowanzoita chimwe chinhu chinotuma chinokonzera kuG GA chinoreva kuti chinoshandiswa zvisina kururama. Vanogona kunge vari pop-ups kana auto-play mavhidhiyo anoshandiswa nemuridzi. Kuva nekunyorera kwechikwata chezviitiko nezviitiko zvinotarisa kufema mabhuku munzvimbo ino chinhu chakanaka.
Kuderedza Kupihwa Mitengo
Nzira chete yekuita izvi ndeyokuwedzera hutano hwekubatana pamapeji ekutambisa. Kukwirira kudhura kubva kumunhu mumwe nomumwe kunofanira kutungamirira muridzi kuti aone uye aone kuti zvinotarisirwa nevakashanyi ndezvipi munyaya iyi. Kana izvo zvinotarisirwa zvakanaka, asi iwe uchiri kukwira zvakanyanya kuwanda kwemazinga, ipapo mapeji akazara mapeji ari pedyo.
Vamwe vanhu vanokanganisa bounce rates uye kubuda kwemitengo. Bvisa maitirwo anotaura nezvemugumo wekupedzisira wemushandisi uye nei vakagumisa pa peji iyo.
Bounce mitengo inofanira kubatsira kuziva kana nzvimbo yacho ichirarama kusvika kune zvinotarisirwa nevatariri. Uyewo, vanofanira kubatsira mukugadzira nzvimbo yakakosha yevashandi Source .